Ma Sidanoo Dhan Ayay Saxeexiisa Ugu Waalanayaan? Barcelona Oo Xiddig Weyn Oo Kooxdeeda Ah Iibinaysa Si Ay Lacag Ugu Hesho Heshiiska Neymar JR. - Gool24.Net
Ma Sidanoo Dhan Ayay Saxeexiisa Ugu Waalanayaan? Barcelona Oo Xiddig Weyn Oo Kooxdeeda Ah Iibinaysa Si Ay Lacag Ugu Hesho Heshiiska Neymar JR.
Waxa durtaba xilli suuqa xagaaga kahor sii bilaabmaya wararka xanta ah ee aan kala joogsiga lahayn ee Neymar JR la xidhiidhinayaa kusoo laabashada kooxdii uu ku dhawaad saddex sano kahor ka baxay ee Barcelona oo qudheedu xiiso u muujinaysa.
Wargeyska SPORT ayaa shaaca ka qaaday sheeko cusub isagoo xusaya in Barcelona ay u furan tahay inay iibiso weeraryahanka kooxdeeda ee Antoine Greizmann si ay lacag ay ku bixiso ugu hesho soo xero-galinta Neymar.
Greizmann ayaa si lama filaan ah loola xidhiidhinayay Paris Saint-Germain isla xagaagii hore walow uu markaas uu kusoo biiray Barcelona iyadoo ay saxaafadu hadal haysay inuu heshiis xiddigo is-dhaafsi ah ugu wareegi karo kooxda dalkiisa.
Dhibaatada ugu weyn ee Barcelona ka haysatay saxeexa Ney ayaa ahaa inaysan awood buuxda u lahayn inay gaadhaan qiimihii ay Paris dul dhigtay iibkiisa taas oo dhalisay inay diraan dalabaad badan oo ciyaartoy iyo lacag iskugu jiray walow lagu soo gacan saydhay.
Haatan, Sida uu sheegayo Sport Barca ayaan waxba ka dhawrsan doonin oo waxkasta u samayn doonta sidii ay Neymar ugu soo celin lahayd safkeeda iyadoo xataa iibin karta Greizmann oo xilli ciyaareedkiisii koowaad uun hadda qaadanaya.
Greizmann ayaa xagaagii hore Barca ugu soo wareegay aduun dhan 120 Milyan oo euro iyagoo bixiyay lacagtii heshiiskiisa lagu jabin karayay isla markaana ka saxeexday qandaraas shan sano ah.
Xiisaha soo laba-kaclaynaya ee Barcelona ay u muujinayso Neymar ayaa muujinaya sida ay u doonayso saxeexiisa markale iyadoo shaqsiga ugu muhiimsan ee dalbanaya uu yahay kabtanka kooxdaas ee Lionel Messi.